UPDATE: Ammaanka Dhuusamareeb oo si weyn loo adkeeyay & Farmaajo oo ku wajahan | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Ammaanka Dhuusamareeb oo si weyn loo adkeeyay & Farmaajo oo ku...
UPDATE: Ammaanka Dhuusamareeb oo si weyn loo adkeeyay & Farmaajo oo ku wajahan
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Wararka saaka naga soo gaaraya magaalada magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in xalay ilaa iyo saaka si aad ah loo adkeeyey ammaanka magaalada Dhuusamareeb.
Ciidamada Booliska Soomaaliya ee dhawaan la geeyay magaalada ayaa saaka ku sugan inta badan Isgoyska Magaalada iyo Waddooyinka laga soo galo.
Sidoo kale, waxaa si weyn loo adkeeyay Ammaanka Garoonka Diyaaraddaha ee Magaalada Dhuusamareeb, waxaana Ciidanka ku sugan lagu kordhiyay Ciidanka Ilaaladda Madaxtooyadda Soomaaliya.
Madaxweynaha JF Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in Isniinta maalinta uu gaaray magaalada Dhuusamareeb, islamarkaana uu soo xiro Shirka dib u heshiisiinta beelaha maamulka Galmudug.
Ammaanka Dhuusamareeb si aad ah loo adkeeya
Farmaajo ku wajahan